ကောင်တီ - ဝီကီပီးဒီးယား
ကောင်တီ (အင်္ဂလိပ်: county သည် အချို့သော ခေတ်သစ်နိုင်ငံများတွင် အုပ်ချုပ်ရေး (သို့) ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခုအတွက် အသုံးပြုသော ပထဝီဆိုင်ရာနယ်မြေတစ်ခုကို ဆိုလိုသည်။ ဤဝေါဟာရသည် ရှေးဟောင်းပြင်သစ်စကား conté (သို့) cunté မှ ဆင်းသက်လာပြီး မြို့စား၊ နယ်စား (count, earl, viscount) တို့၏ အချုပ်အခြာအာဏာအောက်ရှိ စီရင်ပိုင်ခွင့်နယ်ကို ညွှန်းဆိုခြင်းဖြစ်၏ ။ အခြားဘာသာစကားများတွင် တိုက်ရိုက်အနက်တူစာလုံးများသည် comté, contea, contado, comtat, condado, Grafschaft, graafschap နှင့် စလဗ်ဘာသာစကားတွင် "zhupa" တို့ဖြစ်ကြပြီး ယခုတွင် အသုံးနည်းပြီဖြစ်၏ ။ အင်္ဂလိပ်စကားရှိ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများဖြစ်သော မြူနီစပယ် (municipality) ၊ စီရင်စု/ခရိုင် (district) ၊ ဆားကစ်တ် (circuit) ၊ ကွန်မြူး/ကွန်မြူနတီ (commune/community) တို့ကို ကောင်တီအစား များသောအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။
အင်္ဂလန်ကို နော်မန်တို့ သိမ်းပိုက်အောင်မြင်ခဲ့သောအခါ ဤဝေါဟာရကို ၎င်းတို့နှင့်အတူ ယူဆောင်လာကာ ဆက်ခ်ဆန် (Saxons) မျိုးနွယ်များသည် အင်္ဂလန်၏ သမိုင်းဝင် ကောင်တီများဖြစ်ခဲ့ကြသော စီရင်စုနယ်မြေများတွင် အခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြပြီး ရှိုင်းယား (shire) ဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ကြသည်။ ရုံးစိုက်ရာမြို့ (county seat) အမည်မှ ဆင်းသက်လာသော ကောင်တီအမည်များကို ရှိုင်းယား စကားလုံးပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းပြီး ဂလော့စတာရှီးယား (Gloucestershire) [မှတ်စု ၁] ၊ ဝတ်စတာရှီးယား (Worcestershire) ဖြစ်လာကြသည်။ နော်မန်တို့လက်ထက်တွင် အန်ဂလို-ဆက်ခ်ဆန် ဝေါဟာရဖြစ်သည့် earl နှင့် earldom (မြို့စား) ကို ဥရောပတိုက်၏ ဝေါဟာရ "count" နှင့် "county" တို့၏ အနက်တူစာလုံးအဖြစ် ယူခဲ့ကြသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ထိုနှစ်မျိုးသည် ပေါင်းစပ်သွား၍ တူညီသွား၏ ။ ထို့အပြင် နောက်ပိုင်းမှ ဝင်ရောက်လာသော (ကောင်တီ)ဝေါဟာရသည် ရှေးဟောင်းအင်္ဂလိပ်စာလုံး sċīr ([ʃiːr]) (သို့) ခေတ်သစ်အင်္ဂလိပ်စာလုံး shire တို့အတွက် ကြောင်းတူသံကွဲဖြစ်လာခဲ့ကာ "ဘုရင့်တိုင်းပြည်၏ အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေခွဲ" ဆိုသည်နှင့် ညီမျှလေသည်။ ဤဝေါဟာရပေါ်ထွက်လာရာ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် တပေါင်းတစည်းတည်း အုပ်ချုပ်သောနိုင်ငံရေးစနစ် (unitary၊ federal (ပြည်ထောင်စုစနစ်မဟုတ်)) အတွင်း နိုင်ငံတော်/ဗဟိုအစိုးရ အောက်ရှိ တိုက်ရိုက်သစ္စာခံသော ဒေသဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအဆင့်ကို ရည်ညွှန်းသည်။ ပြည်ထောင်စုစနစ်အုပ်ချုပ်ရေးအချို့၌လည်း ကောင်တီကို မတူညီစွာဖြင့် သုံးစွဲကြပြီး အမေရိက၌ စတိတ် (state) ၊ ကနေဒါ၌ ပရိုဗင့်စ် (province) တို့ကဲ့သို့ ပထမတန်းအဆင့်ရှိ တိုင်း/ပြည်နယ် ထက်နိမ့်သော ဒေသဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေခွဲကို ဆိုလိုသည်။ ဤနိုင်ငံများတွင် ကောင်တီသည် အဆင့်အတန်း (၃) ရှိသော နယ်မြေများဖြစ်ကြသည်။
ကောင်တီနယ်မြေတစ်ခုကို စီရင်စု (district) ၊ ရာပြုမြို့ (hundred) ၊ မြို့နယ် (township) (သို့) အခြားအုပ်ချုပ်စီရင်ပိုင်ခွင့်နယ်မြေများအဖြစ် ထပ်မံခွဲခြားနိုင်သည်။ များသောအားဖြင့် ကောင်တီတွင် မြို့တော်၊ မြို့၊ မြို့နယ်၊ ရွာနှင့် အခြားမြူနီစပယ်နယ်မြေများပါဝင်နိုင်ပြီး ထိုနယ်မြေအသေးများသည် ကောင်တီအစိုးရများ၏ အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် ရှိသည်။ နိုင်ငံ၊ မြူနီစပယ်၊ ပထဝီနယ်မြေများ အပေါ်မူတည်၍ မြူနီစပယ်နယ်မြေများသည် ကောင်တီအစိုးရအောက် တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ တစ်ဆင့်ခံသော်လည်းကောင်း ရှိချင်ရှိနိုင်သလို ရှိချင်မှလည်းရှိမည်။ ဥပမာအားဖြင့် လူဦးရေအလွန်ထူထပ်သောနယ်မြေများတွင် ကောင်တီ၊ မြူနီစပယ် နှစ်ခုစလုံးသည် မြို့တော်အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းသို့ ကျစ်လျစ်စွာ ပေါင်းစည်းသွားသည်လည်းရှိ၏ ။[မှတ်စု ၂]
အင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်ငံများ၏ ပြင်ပ၌ ကောင်တီနှင့် တူညီသော ဝေါဟာရ(တစ်ခု)ကို "စီရင်ပိုင်ခွင့်နယ်မြေခွဲ" (subnational jurisdictions) များအား ဖော်ပြရန်အတွက် သုံးစွဲလေ့ရှိကြသည်။ ထိုနယ်မြေများသည် တည်ဆောက်ပုံအရ "ဗဟိုအစိုးရနှင့် ပတ်သက်ဆက်သွယ်သော ကောင်တီများ"နှင့် တူညီသော်လည်း"[မှတ်စု ၃] အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာအရ အင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်ငံများရှိ ကောင်တီများနှင့် တူချင်မှတူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
↑ shire တစ်လုံးတည်းကို "ရှိုင်းယား"ဟု အသံထွက်သော်လည်း နေရာအမည်နှင့် တွဲဖက်ပါက "-ရှီးယား" ဟု ဗြိတိသျှတို့က အသံထွက်ကြသည်။
↑ National governments that are Federations, such as Germany have subdivisions similar to the English Counties in size. France has regions and departements which similarly provide governmental services. Which services are mapped to which governmental offices, level or officials is the province of the national constitution and legislative body.
↑ Vision of Britain  — Type details for ancient county. Retrieved 31 March 2012
↑ "county"။ Etymology Online။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကောင်တီ&oldid=687551" မှ ရယူရန်
Old French (842-ca. 1400)ဘာသာစကား ပါဝင်သော ဆောင်းပါးများ
ဤစာမျက်နှာကို ၂၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၃:၃၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။